Water Point semumiriri wega Elkay muPoland mune zvekupa chidhakwa, matsime mvura kunwa chitubu uye kunwa matsime emvura, ezvikoro nemayunivhesiti, zvivakwa zvehofisi, mashopu ekushambadzira, zvidyarwa zvekugadzira, makirabhu ekusimbisa, nzvimbo dzemitambo, nhandare, nhepfenyuro, nzvimbo dzehutano, horo dzevaraidzo, nzvimbo dzemitambo, mafirimu, mahofisi ehurumende, mapaki, nzvimbo dzekutamba, nhandare, nezvimwe.
Dual-chinangwa chinonwa ndiro - LZS8WSS2K modhi
Green Kubiridzira - Inotaridza huwandu hwemabhodhoro epurasitiki akaponeswa.
Graphic yefaira rekuongorora (mamodheru ane firita chete) - Girinhi, yero, uye matsvuku maLED anoratidza mamiriro efaera.
Laminar rukova - Yakadzoserwa yekuzadza kamwene - inochengetedza kuyerera kwakatsetseka uye mashoma spatter
Anochinjika spout - Flexi-Guard inodzivirira kukuvara kwevashandisi. Iine chifukidzo chinodzivirira pakukura kwema microorganisms.
Magetsi sensor activation - Kusa-kuonana uye kwehutsanana mashandiro otomatiki switch-off mushure memasekondi makumi maviri yekusaita basa.
Kana ikashandiswa mumasangano echikoro, inogona kuve yakagadzirirwa neakasarudzika, inoshanda zvakanyanya, inochinja-chinja Easy-Flex spout inodzivirira vana kukuvara. Iyo yekuparadzira yekuzadza mabhodhoro inokonzereswa otomatiki ne sensor.
Chinwiwa - muenzaniso EZS8S
Kana ikashandiswa mumasangano echikoro, inogona kuve yakagadzirirwa neakasarudzika, inoshanda zvakanyanya, inochinja-chinja Easy-Flex spout inodzivirira vana kukuvara.
Chidhakwa - seti LZSTL8WSS2K
Chinwiwa - mamodheru anodzivirira
Wokunwa chinwiwa - zvakasikwa uwandu